ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အသရေပျက်အောင် လုပ်ကြံသည့် ငါးမင်းဆွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အသရေပျက်အောင် လုပ်ကြံသည့် ငါးမင်းဆွေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အသရေပျက်အောင် လုပ်ကြံသည့် ငါးမင်းဆွေ
Posted by နွယ်ပင် on Nov 26, 2010 in Myanma News, News | 35 comments
ကိုနစ်နေမန်းဆီမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
အသံသာ၇ှိပြီးအဆံမ၇ှိသော..ငါးမင်းဆွေကဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဘို့အခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတော့မအံ့သြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူထဲကပြည်သူတယောက်မဖြစ်သလို၊ ဒေါ်စုကတိုက်၇ိုက်တွေ့ဆုံဆွေူးနွေးလိုတဲ့နအဖ၇ဲ့တာဝန်၇ှိသူလဲမဟုတ်တော့…သူ့ကိုတွေ့စ၇ာအကြောင်းမ၇ှိဘူးဆိုတာသူကောင်းကောင်းကြီးသိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင်းလေကြီးမိုးကျယ်လုပ်တာပါ။ အနဲဆုံးသူ့ဆောင်းပါးမှာဒေါ်စုကသူ့ကိုမတွေ့၇ဲဘူး၊တွေ့ဘို့ငြင်းဆန်တယ်ဆိုပြီးေ၇းဘို့စီစဉ်ပြီးသားပါ။
“ငါးမင်းဆွေမှ ၄င်းရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးမိတ္တူများကို ပြည်တွင်းဂျာနယ်မှ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် လူအချို့အား လိုက်လံဝေငှခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ထိုမိတ္တူဆောင်းပါးကို တောင်းရာ ပြည်ပနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနမှဆိုရင် မပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။”
ဘာလဲဟ ဒါက??? သူမှန်တယ်ထင်ရင် ပေးရဲရမှာပေါ့။
သူ့ကိုယ်သူလဲ ဖားမင်းဆွေလို့အများကခေါ်ကြမယ်လို့ထင်ကြောင်းဆောင်းပါးတခုမှာဝန်ခံထားပါတယ်။ သူ့မှာ၇ှိတဲ့ပင်ကိုယ်အေ၇ည်အချင်းနဲ့ဘယ်လိုမှမ၇နိုင်တဲ့အခွင့်ထူးတွေမကြုံစဖူးခံစားချင်တော့လဲ….ဖား၇မှာမ၇ှက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နားမျက်စိတွေ မပိတ်ပါနဲ့ ဆိုတော့ သူ့စာတွေဖတ်မှပဲ နားပွင့် မျက်စိပွင့် ဖြစ်ရတော့မဲ့ ပုံစံကြီးပါလား။
ငါးမင်းဆွေကို အခုမှ မြင်ဖူးတာ။ တကယ့်ကို ငါးတစ်ကောင်နဲ့ တူနေပါလား။
အကုသိုလ်တွေက ဒီဘဝမှာတင် အကျိုးပေးနေပြီနဲ့ တူတယ်။
ဝက်သတ်သမားတစ်ယောက် ဝက်လိုအော်ပြီး သေရတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးလို့ပါ။
ဖားမင်းဆွေ တော.ရေအိုင် ထဲက ဖား ဖြစ်နေပြီ ။ အသိညဏ်တော. ရှိပါ ကို ဖားမင်းဆွေ ။ နား။မျက်စိကို ပြည်တွင်းမှာ ဘဲ မကြည်.ပါနဲ. ။
ငဖားကောင်ကြီးရေ …. ရုပ်ကိုက ကျက်သရေကို မရှိဘူး…
သူ့ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ကြည့်ဘူးပါတယ် ဒီရုပ်ကိုတွေ့ဘူးချင်နေတာ ဒီကောင့်နံမည်ကငါးမင်းဆွေမှမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူအားလုံးကသူ့ကိုဖါးမင်းဆွေလို့ပြောင်းပေးပြီးသားပါ ၊ မြေသြဇာအဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးချင်တယ် မင်းတို့စာရွက်တွေလိုက်ဝေမဲ့အစား အာဏာရူးလက်ကိုင်တုတ် ဖါးမင်းဆွေ လိုကောင်မျိုးကို (လားပင်စင်ပေးရမှာ)…..။။ ရုပ်ကိုကကြက်သရေမရှိဘူးရုပ်နဲ့လူနဲ့လိုက်ပါ့ကွာ
ကိုဖါးမင်းဆွေရေ………….ဘာမှဖားမနေပါနဲ့ ။ခင်ဗျား အဖေကြီးကလေ ခင်ဗျားကိုဘာမှ လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ။ ဒီအသက်ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီ ဦးနှောက်ကိုမရှိဘူး ။မြန်မာလူမျိုးလို ပြောရမှာတောင် ခင်ဗျားနဲမတန်ဘူး။
အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ ဖားမင်းဆွေပဲ.. သူ့ဆောင်းပါးပါတဲ့ ဂျာနယ်ဆိုရင် လုံးဝ ဝယ်မဖတ်တော့ဘူး.. နောက်ပီ လျှက်တစ်ပြက် ဂျာနယ်ကိုလဲ ဒီနေ့ကစ နောက်နှစ်များစွာတိုင် လုံးဝ (လုံးဝ) ဝယ်မဖတ်၊ ငှားမဖတ်တော့ပါကြောင်း.. ဆိုင်မှာတွေ့ရင်တောင် ကိုင်ကြည့်ဖို့ ရွံတယ်..
အလကားဖော်လံဖား နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားတစ်ကောင်ရုပ်နဲ့ ကောင်ပါ။
ဒီလိုမျိုးမှ မလုပ်ရင် ဘာမှလုပ်မစားတတ်တဲ့ လူမျိုးနေမှာပါ။
ဒါမျိုးကလည်း မျိုးမျိုးမျက်မျက်လေးရမှာဆိုတော့ အော်ပေါ့ကွာ ဆန်ကုန်မြေလေး ဖားမင်းဆွေရေ။
မျက်ခွက်ကို ဖနောင့်နဲ. အချက်၂၀ လောက် ၀ိုင်းပေါက် ဖို.ကောင်းတယ် … ကျက်သရေကိုမရှိဘူး ….
ကဲရွာသားတို့ရေ … တစ်ကွေ့ကွေ့မှာဒီကောင်နဲ့စုံရင် ၀ိုင်းဆော်ကြမယ် ။ အန်တီစုကိုချစ်တဲ့လူတွေ တစ်ယောက်တစ်ချက်ဝိုင်းဆော်ရင်တောင် ဒီကောင် အမှုန့်ဖြစ်သွားမယ် ။
“Reckless Provocation” Don’t care it
မအေxxx ရုပ်ကိုက ခွေးကြွေးလို့ ၀က်မစားတဲ့ ရုပ်…. ပါးတွေချည့် လှိမ့်ရိုက်ပစ်ရမှာ
facebook ထဲက ဖားမင်းဆွေ အကြောင်း comment ရေးထားတာပါ။ copy and paste လုပ်ထားတာပါ။
ငါးမင်းဆွေဘယ်သူလည်း ??? ဘယ်ကလာလည်း ??? ဘယ်လိုလူမျိုးလည်း ??? စိတ်ဝင်စားစရာပါ …. သူက ..မွန်ပြည်နယ် သထုံ ရင်းငြိမ် ပေါင် ဒေသဘက်ကပါ … သူ့ဖခင်က ထိုဒေသများတွေင် ဆားသူဌေးလို့ လူသိများတဲ့သူ … လူသိများချင်းမှာ အကောင်းနဲ့ လူသိများချင်းထက် အဆို…းနဲ့ လူသိများတဲ့သူ .. တရားဝင် မိန်းမ ပင် အရေအတွက်အတော်များတယ် (အတိအကျမသိလို့မပြောတော့ပါ) သေခြာတာကတော့ ၂ ယောက် ၃ ယောက် မကပါ … တရားမ၀င် မိန်းမတွေက တော့ ပြောစရာပင်မလို … လိုရင်းပြောရရင်တော့ သူသည် ထို ဆားသူဌေးရဲ့ မိန်းမ များစွာထဲက တစ်ယောက်ကမွေးတာပါ … ဒါလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ် … အဲဒါဆို အပေါ်မှာ စစချင်းမေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် စဉ်းစားဖို့လေးတွေ ရလောက်ပါပီ ..အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အော ဆွေဂုဏ်မျိုးဂုဏ်ကြီးမားတဲ့ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတာပါလား ဟိဟိ ။
ရုပ်ကိုက ဟိုဟာနဲ့စပ် ၊ ဒီဟာနဲ့စပ်ပြီးရလာတဲ့ရုပ်
မြတ်ခိုင်ကိုသူတို့လောကလူတွေကရွံကြောက်ကြီးဗျာ သူနဲ့အဆင်ပြေရင်ပြေသလိုကောင်းကောင်းရးမယ်သူနဲ့ အဆင်မပြေရင်မိန်းမကြီးတယောက်လိုအတင်းတုတ်တော့တာပဲ အခုတော့ဟိုပေါင်ကပ်ဒီပေါင်ကပ်နဲ့ဆိတ်ဂွေးစိမြတ်ခိုင်ဖြစ်သွားပြီ
အို.ဟိုး .. ဒီလိုအဆင့်မရှိတဲ့သူရေးမှတော့ ဒီလိုအဆင့်မရှိတဲ့ ငဖားစာတွေပဲထွက်မှာပေါ့ … အန်တီစုကို ဘယ်လောက် အသရေပျက်အောင်ဖျက်ဖျက် .. အန်တီစုက သူ.တန်ဖိုးနဲ.သူရှိပြီးသား …
ဲပြည်သူတွေကလည်းမေတ္တာမပျက်ဘူး … ငဖားကြီးမင်းဆွေသာ စောက်ပေါဖြစ်ပြီးဝိုင်းဗြင်းမခံရခင် အမြင်မှန်ရသင့်တယ် ….
တော်တော်ကို အရှက်မဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ပါလား။
ရုပ်ကလည်း အဆင့်အတန်းတော်တော်နိမ့်ပြီး အောက်တန်းအဆုံးထိကျမယ့်ရုပ်မျိုး။
ဟိုတစ်ယောက်ရေးသလို ဆားကျင်းထောင်တဲ့အရှုပ်ကောင်နဲ့ ဘယ်မိန်းမပျက် စပ်ကျထားတဲ့ကောင်မှန်းမသိ။ တော်တော် ကျက်သရေတုံးတယ်။
အဲဒီ ဖားမင်းဆွေက တိုက်(၁၄) အခန်း(၁၆) လှိုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာ လှိုင် မှာနေထိုင်ပါတယ် မှတ်ပုံတင်အမှတ်က ၁၀/သမရ(နိုင်)၀၄၃၈၀၅ ပါ ။ (နာမည်ကျော် လက်ဖက်ရည် ဖျော်ဆရာ ဟောင်း ကိုဘပု ရေ ဒီတစ်ခါ ဖားမင်းဆွေအိမ်သွားရင် စာပေစိစစ်ရေး ကိုသွားတုန်းကလို ငါးထုပ်ထဲတော့မလုပ်နဲ့နော် များများသာ ယူသွားဖို့ပြောချင်ပါတယ် ..) ….:D
ဖြစ်နိုင်ရင်ဂုတ်ကနေဆွဲပြီး ချီးတွင်းထဲ ပစ်သာချလိုက် ……
ဟိုမြတ်ခိုင်ဆိုတဲ့အကောင်ရော၊ သူ့သားအလေနတောကောင်ရော ပါအောင်ခေါ်သွားဦး ။ သုံးယောက်စလုံးပစ်ချမှ ချီးတွင်းပြည့်မယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့ရယ် စိတ်လေးတော့ နည်းနည်းလျော့ကြပါ၊ သူ့ကြည့်ရတာ အကုသိုလ်များတယ်၊ လှိုင်ကလူတွေပါ နာမည်ပျက်တယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီလိုလူတွေ နည်းနည်းမဟုတ်တော့တာတော့ သေချာတယ်။
မသိသေးတဲ့ ညီငယ် ညီမငယ်များ အနည်းငယ် ပြန်ပြောပြချင်တယ်။
ဒီငါးမင်းဆွေဆိုတဲ့ ကောင်က အရင်သူလဲ ကျောင်းသားပဲ။
ဒို့ရဲ့နောင်တော် သူရဲကောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတောင် ညီလေးဘာညာနဲ့ သုံးပြီး… သတင်းစာပေါ်ကနေ
ကိုယ်တော့ ငါးကန်တွေမွေးခွင့်ရတာနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေပြီ ညီလေးတို့လဲ အဲဒီအယူအဆတွေ ချန်ထားခဲ့ပြီး ကိုယ့်လိုပဲ စီးပွားလုပ်စားရအောင်တဲ့ .. သတင်းစာထဲမှာတောင် အရှက်မရှိ ထည့်ကြော်ညာခွင့်ပေးခဲ့တာ။
ဒီလိုကောင်တွေ နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့နေနိုင်တယ်။
သူတို့က ခေတ်ပျက်သူတောင်းစားတွေ ဖက်ခွက်စားပြောရမလား..
အဲ.. ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော လူစား(ခွေးဝဲစား)မျိုးတွေ
ဒါနဲ့စကားမစပ် ဇေယျာမြတ်ခိုင်နဲ့ ဟိန်းဇေ တူတူပဲလား? သိရင်ပြောပြပေးကြပါအုံး၊ အထင်လွဲတာမျိုး မဖြစ်ရအောင်..။
အော်…..။အဲ့လိုတွေလည်း လုပ်နေကျတာပဲလား။ပြည်သူနဲ့တပ်မတော် လက်နက်မပါကြေး ဖိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူတာလည်းဆိုတာကို သိလောက်မှာပါ။ထောင်ကိစ္စကလည်း သူတို့တွေပြောနေစရာကိုမလိုပါဘူးဗျာ…….နိုင်ငံ
တိုင်းကိုကသိနေတဲ့ကိစ္စပါ။သူတို့တွေထောင်သားတွေကို သေသေချာချာမပြုစုလို့ ပြင်ပကနေတောင် လာကူညီပေးနေရ
တယ်လေ။ဒါတွေလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်း အသိအလင်းကို စေတနာနဲ့ သိက္ခာကျခံပြီ ကြေဌာပေးထားတယ်လေ။
အခု ဒီခွေးမင်းဆွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး အမေစုကို လာတွေ့ချင်တယ်။ ဘာရယ်လို့လုပ်လာတာ လုံးဝမရိုးသားဘူး။ ပြောချင်တာက စစ်ခွေးတွေဘက်က ဘာအကြံတွေ ရှိနေသလဲမသိဘူး။ ဒီကောင်ကို ချကျွေးပြီး တဘက်လက်နဲ့ ဘာခွေးကျင့်ခွေးကြံ ကြံမလိုလဲမသိဘူးနော်။ ဒီကောင် သတင်းစာတွေမှာ ရေးနေတာကြပြီ တခါမှ ရုပ်မမြင်ရဘူး။ အခုမှ ကျက်သရေမရှိတဲ့ ရုပ်တွေဘာတွေ ပေါ်လာပြီး အမေစုဆီလာပြီး ရုပ်ပြတော့ လုံးဝမရိုးသားဘူး။
အားလုံး ဒီဆောက်ရူးကို ဂရုစိုက်မနေနဲ့ ဒီကောင်တွေကိုလည်း မချေမပြတ်စေကြနဲ့။ စစ်ခွေးတွေ ဘာတွေ ကြံနေလဲမသိဘူး။
အရင်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဗုံးပေါက်တာတို့၊ မန္တလေးမှာ ဗုံးပေါက်တာတို့ဆိုတဲ့ ကလေးအကွက်တွေက ပြည်သူတွေသိနေကြပြီ ဒါကြောင့် ဘာအကွက်ပြောင်းလိုက်တာလဲ မသိဘူး။ အားလုံး သတိ။
ဟုတ်တယ်.. မန္တလေးသားပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်.. သူတို့ အကွက်တွေ စရွှေ့နေပြီ.. တစ်ခုခုတော့ ကြံထားမှာသေချာတယ်… ပြီးတော့ ဒီ ဖားမင်းဆွေ ကအမေစု ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီး ဌာနချုပ်ရှေ့မှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်တာ တော်တော် အောက်တန်းကျတာပဲ..
အလကားကောင်.. ကောက်ရိုးပုံစောင့်ပြီး အရိုးလေးကိုက်ရတာကို သေပျော်ပီ ထင်နေတဲ့ကောင်…
အပြင်မှာတွေ့လို့ကတော့ ဖိနပ် ခွေးချီးသုတ်ပြီး ပါးချည်း ဘယ်ပြန်ညာပြန် ရိုက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်..
ငါးမင်းဆွေတဲ့ အလကားကောင်ချီးကောင်.ပြောတိုင်းလုပ်တဲ့ ကောင်
စောက်သုံးကိုမကျဘူး။အသိတရားလေးတော့ ရှိသင့် တယ်။ဘုရားတရားကောသိရဲ့ လား။
သြော် ၊ငါးမင်းဆွေဆိုတာသူကိုး။ တွေ့ဖူးသွားတာပေါ့။